Izvo Zvemukati Zvekuronga Kugadzirwa, Kuvapo kana Chiremera? | Martech Zone
Izvo Zvemukati Zvekuronga Kugadzirwa, Kuvapo kana Chiremera?
Chishanu, May 8, 2015 Douglas Karr
Imwe yemafananidzo andinowanzo kuudza vanhu nezvayo agency yedu ndeyekuti isu hatisi Kushambadzira Jiffy Lube. Basa redu harisi rekukupinza nekukubuda nekukurumidza, kanda chinamirwa pahwindo rako uye ndokuona mwedzi unotevera. Isu tiri vazhinji vevashandi vegomba nekushingairira kugadzirira mota kumhanya. Kune zvakawanda zveJiffy Lubes kunze uko - hatidi kuve mumwe wavo.
Sezvazvinoreva kune zvemukati, aya maagency anopa iwe yekugadzira tambo iwe. X nhamba yezvinyorwa pamwedzi, X nhamba yemapepa machena, X nhamba ye infographics pamutengo weX madhora. Chibvumirano chinotanga uye ivo vanogadzira. Ivo vanobhadharwa pane zvinoburitswa uye nenguva yeprojekti pasina kutarisirwa kwakabhadharwa kuti iwe kana uri kuhwina mujaho.
Isu tinoona makambani mazhinji achinyorera zano iri nekuti - chekutanga - kune toni yevanyori vanyori kunze uko vanoda kutsiga kwebasa uye - chechipiri - ivo havana kukwanisa kuburitsa zvirimo mukati uye vanoziva kuti vari kurasikirwa kune vavanokwikwidza navo. Nehurombo, sezvo ivo vasiri kutarisisa mashandiro ezvirimo, ivo vanoramba vachirasikirwa.
Iyo yakatetepa-yakarongedzwa nzira isina kudzoka kune yekudyara. Mutambo wegungano neavhareji chigadzirwa.
Zano repiri ratinoona mazhinji maangency deploy ndiyo mugove wezwi or kuvapo kwewebhu zano. Izvi zvinosanganisira zvemukati nekusimudzira, nemitemo iri yekuti iwe unogona kuve neyako yakawanda yeinopinda inotungamira kana iwe ukangonyora zvimwe uye uchikurudzira zvakanyanya. Ack… kutambisa nguva kwakadii. Chokwadi, kukura mugove wako wezwi kuchakuwanira mamwe mafambiro. Ini handisi zvachose poo-pooing zano rehuwandu hwekugadzira uye kusimudzira, asi iri kushaya mukana wakakura zvakanyanya.
Iyo nzira yakatwasuka ine yakadzika-yakarongedzwa kudzoka pane investment. Iyo inokurumidza gungano mutsara neiyo imwe yepakati chigadzirwa.
Ko kana iwe ukakwanisa kunyora zvishoma zvemukati izvo zvaive zvine chinangwa, kuchisimudzira, uye kuwedzera kudiwa zvakanyanya? Ndosaka takagadzira yedu zvemukati mvumo nzira nevatengi. Haisi kumhanyisa gungano uye kuburitsa shanduko yemafuta. Iri kuvaka mota yemumhanyi uye nekuidhonza mumakomba pese paunorasikirwa nehutungamiriri.
Iyo iterative nzira pamwe nekuwedzera kudzoka kune investa. Iyo inononoka gungano mutsara ine premium chigadzirwa iyo inotengesa zvirinani zvirinani.
Nezuro manheru ndakapinda Big Data Musangano kuno kuIndianapolis. Mukuvapo kwaive nemutengi watakange tashanda kwemakore kusvikira vaunza manejimendi ekushambadzira. Iye maneja wekushambadzira aive nemamiriro ekugadzirisa zviitiko uye akatarisa kune webhusaiti seyakawanda bhurocha pane inbound yekutengesa chikuva. Akacheka kubatanidzwa kwedu uye kambani yakazorasikirwa nemasimba ayo kuburikidza nekutsvaga uye nemagariro.
Kunyangwe izvi, mutengesi kubva kukambani akataura kuti pasina kupokana, iyo infographic dzakateedzana izvo zvataive takagadzirira kambani 3 makore apfuura yakanga ichiri sosi yavo yakasimba yevatungamiriri vanokwanisa kuburikidza newebhu. Ndiyo mhando chirongwa chatiri kutaura nezvacho pano. Iwe unobhadhara zvakanyanya nhasi, asi iwe unowana exponentially zvirinani mhedzisiro nekufamba kwenguva!
Tags: zvemukati mvumozviripo kuvepokugadzirwa kwemukatizvemukati zanoinfographic dzakateedzanakuvapo kwewebhu
Ndinoshuva Kuti Vatengesi Vangarega Kutaura Izvi…
May 9, 2015 pa 5: 45 AM
Yakanaka saiti Douglas, ine yakawanda info inobatsira.
Ini ndangonyoresa kune yako tsamba yevhiki nevhiki.